पपअप हाउस, एक निष्क्रिय घर चार दिनमा निर्माण गरियो | हरियो नवीकरणीय
पपअप हाउस, एक निष्क्रिय घर चार दिनमा निर्माण गरियो
केवल एक स्क्रूड्रिभर र रिसाइक्ड सामग्रीहरूको साथ एउटा घर निर्माण गर्नु विज्ञान कथा जस्तो देखिन्छ। र अझै यो यो शर्त छ कि मल्टीपड स्टुडियो संग पपअप घर.
La पपअप घर निर्माणको क्रममा यसको वेग र सरलताको लागि यसको नाम छ। पूर्ण रूपमा काठ र पुनर्चक्रित सामग्रीको साथ निर्मित, यस निष्क्रिय घरले थोरै माग गर्दछ हीटिंग: प्रति m15 १ k kWh भन्दा कम। यसको असेंब्लीको लागि, तपाईंलाई उपकरण वा जटिल मेसिनरीको आवश्यक पर्दैन: एक स्क्रूड्रिभर पर्याप्त छ। यसका साथ बनेको अवरोधहरू polystyrene र काठ तुलनात्मक रूपमा हल्का छन् र एक्लै हतियारको बलले माथि उठाउन सकिन्छ।
El आइसोलेसन थर्मल यो जमीनमा काठ वा क concrete्क्रीट प्लिंथबाट सुरू हुन्छ। काठको पानाहरूबाट छुट्याएको पोलिस्टीरिन ब्लाकहरूको निर्माणले थुप्रै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। सेट को हो कोस्टे low, हेरफेर गर्न सजिलो र माथिको सम्पूर्ण पूर्ण मोडुलर। प्रत्येक घर सजीलै शिल्प गर्न सकिन्छaनाप.
जब संरचना यो समाप्त भयो, यो विभिन्न तरिकामा लुगा लगाउन सकिन्छ, कभर वा घर पाउनको लागि चित्रित गर्न सकिन्छ पूर्वनिर्मित मूल र किफायती। लाइनर बिना लागत लागत, प्लम्बिंग र विद्युतीय स्थापना यसमा छ २०० यूरो / एम २, श्रम समावेश
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » ऊर्जा बचत » हरियो घर » पपअप हाउस, एक निष्क्रिय घर चार दिनमा निर्माण गरियो
नासाले पृथ्वीमा CO2 चक्र देखाउँदै भिडियो जारी गर्दछ
प्लास्टिकको विश्व उत्पादन